စင်ကာပူနိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသော ပြည်ပခရီးသွားများဝင်ရောက်ခွင့် ၅ နိုင်ငံ ထပ်တိုး ခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
စင်ကာပူ ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
စင်ကာပူနိုင်ငံသည် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားပြီးသော ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ခရီးသွားများဝင်ရောက်ခွင့်(VTL) အစီအစဉ်ကို အိန္ဒိယ ၊ အင်ဒိုနီးရှား ၊ ကာတာ ၊ ဆော်ဒီအာရေးဗျ နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု(UAE) နိုင်ငံများကို ထပ်တိုးခွင့်ပြုပေးလိုက်ကြောင်း စင်ကာပူ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။အဆိုပါ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားပြီးသော ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ခရီးသွားများ(VTLs) ဝင်ရောက်ခွင့် ထပ်တိုးအစီအစဉ်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် အိန္ဒိယ နှင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံများဖြင့် စတင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကာတာ ၊ ဆော်ဒီအာရေးဗျ နှင့် UAE (ယူအေအီး) နိုင်ငံများကိုမူ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံသည် VTLs အစီအစဉ်ဖြင့် ဩစတြေးလျ ၊ ဘရူနိုင်း ၊ ကနေဒါ ၊ ဒိန်းမတ် ၊ ပြင်သစ် ၊ ဂျာမနီ ၊ အီတလီ ၊ နယ်သာလန် ၊ တောင်ကိုရီးယား ၊ စပိန် ၊ ဆွစ်ဇာလန် ၊ ဗြိတိန် နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကို ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုထားကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် စင်ကာပူနိုင်ငံသည် မလေးရှား ၊ ဖင်လန် နှင့် ဆွီဒင် နိုင်ငံများနှင့်အတူ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်မှ စတင်ကာ VTLs အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
VTL အစီအစဉ်အောက်တွင် ခရီးသွားများအနေဖြင့် ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင် Stay-Home နေထိုင်ရန်မလိုကြောင်း ၊ ယင်းအစား ၎င်းတို့သည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံက မထွက်ခွာမီ ၂ ရက်အတွင်း ဆေးစစ်ထားသော (Pre-Departure Test) ၏ ရလဒ်တွင် ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း ပြသရန်လိုအပ်ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင် PCR စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် အတည်ပြုလူနာသစ် ၂,၀၆၉ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ နိုင်ငံတွင်အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၂၃၉,၂၇၂ ဦးထိ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း စင်ကာပူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အသက် ၇၁ နှစ်မှ ၉၆ နှစ် အရွယ်ကြား ကိုဗစ်ရောဂါ သက်ကြီးလူနာ ၈ ဦး ထပ်မံ သေဆုံးခဲ့သဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၅၉၄ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Singapore to launch Vaccinated Travel Lanes with five more countries
SINGAPORE, Nov. 16 (Xinhua) — Singapore will extend the Vaccinated Travel Lane (VTL) arrangement to include India, Indonesia, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE), the Ministry of Health said inapress release on Monday.
The VTLs with India and Indonesia will start to work from Nov. 29, and those with Qatar, Saudi Arabia and the UAE will be launched on Dec. 6.
To date, Singapore has launched VTLs with Australia, Brunei, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands, South Korea, Spain, Switzerland, Britain, and the United States, said the health ministry.
Singapore will also launch VTLs with Malaysia, Finland, and Sweden from Nov. 29.
According to the health ministry, travelers under the VTL arrangement are not subject to Stay-Home Notice on arrival. Instead, they will be required to produceanegative result of Pre-Departure Test taken within two days prior to departure and undergo an on-arrival PCR (polymerase chain reaction) test.
On Monday, Singapore’s health ministry reported 2,069 new confirmed cases of COVID-19, bringing the total tally to 239,272. Meanwhile, eight more cases, aged from 71 to 96, were reported to have died from COVID-19 in the Southeast Asian country, taking the coronavirus death toll to 594.
A cyclist cycles at the Merlion Park in Singapore’s Marina Bay on Aug. 11, 2021. (Photo by Then Chih Wey/Xinhua)